ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၄)
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၄)
လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်နေမိတယ်။ ဘာကြောင့်ရယ် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ သေချာသတိထားကြည့်မှ လမ်းလျှောက်နေတာကို ရပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးနေမိတယ်။ ငါဘာလို့ ဒီလမ်းမပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်နေရတာလဲ။ ငါဘယ်ကနေ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ။ ငါအခုရောက်နေတာက ဘယ်နေရာလဲ။
ကားလမ်းနှစ်ဖက်အဆုံး ဘာမှ ဘာမှမရှိ.. လူသူကင်းမဲ့နေတာကို လရောင်ပြပြအောက်မို့ သတိထားမိတယ်။ ကားလမ်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း အုပ်ဆိုင်းညိုမိုင်းနေတဲ့ တောအုပ်ကြီးသာ ရှိတယ်။ သတိထားလာလေ ကြောက်စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်လာလေ။ ခုချိန်မှာ လူဆိုးလူသတ်သမား မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့ တွေ့ရင် ငါရဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့် ငါဘာမှခုခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး...။ ပြောနေရင်း ကြောက်စိတ်ကြောင့်ထင်တယ် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်အာရုံတစ်ခုကြောင့် အတွေးတွေ ရပ်တန့်သွားတယ်။ ဓာတ်တိုင် ၁၂ တိုင်လောက် အကွာအဝေးတွင် လူတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဘက်ကို မျက်နှာမူလျက် အနေအထားနဲ့ ရပ်ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဖော်မဲ့နေတာ တစ်ကြောင်း ထိုသူ့ ဆီ ...သွားချင်နေတာနဲ့ သူ့ဆီ တရွေ့ရွေ့လျှောက်သွားမိတယ်။ အနည်းငယ် သူနဲ့ နီးကပ်လာတော့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေတဲ့ သူဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှန်း သိလာရတယ်။ ဆက်လျှောက်သွားရင်း သူနဲ့နီးကပ်လာတော့ ကျွန်တော်မြင်ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲလို့ သေချာကြည့်မိတော့ ... ကျွန်တော် ရင်ထိတ်ပြီး ခေါင်းတွေ ကြီးသွားတယ်...
ဟုတ်ပါတယ် ဇင် မှ ဇင် အစစ်ပါ။ ကျွန်တော်သိပ်ချစ်ရတဲ့ ဇင်ပါ။ ဇင့် မျက်နာက ဖြူဖတ် ညိုးငယ်နေပြီး မျက်လုံးမှာ မျက်ရည်စလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ၀မ်းနည်းနေတဲ့ အကြည့်လိုလို သူ့ကိုကယ်ပါအုန်းလို့ ပါးစပ်က မပြောပေမဲ့ သူ့ရဲ့အမူအရာက သိသာထင်ရှားနေတယ် ..
“ ... ဇင် ..ဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုကြီးကို ပြောပါအုန်း....”
ကျွန်တော်သူ့လက်ကလေးကို ကိုင်ပြီး ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော့်လက်မှာ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေတာနဲ့ ကျွန်တော်ကိုင်ထားတဲ့ ဇင့်လက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ “ သွေး ” တွေ ... ဟာ..... ဇင့် ရဲ့လက်မှာသွေးတွေနဲ့ နောက်ပြီး ဇင့်ရဲ့ဗိုက်က သွေးတွေဒလဟော စီးကျလာတယ်... ကျွန်တော့် ဇင့် အတွက် လန့်ဖျန့်ပြီး ဇင့်ဗိုက်ကို လက်နဲ့အုပ်ကိုင်ဖို့ သေချာကပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဇင့်ရဲ့ဗိုက်မှာ လက်သီးဆုက်လောက်ရှိတဲ့ အပေါက်ကို ဒိုးရိုပေါက်ကြီးမြင်လိုက်ရလို့ ကျွန်တော့် လိပ်ပြာလွင့်မတတ် ဖြစ်သွားပြီး..
ကျွန်တော့်အိပ်ယာမှ လန့်နှိုးလာတယ်။ လူတစ်ကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေစိုရွှဲနေတယ်။ မျက်လုံးကို သေချာပွတ်သပ်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကို သေချာပြန်စမ်းကြည့်မှ ငါ အိမ်မက်မက်နေပါလားလို့ .. နောက် သတိထားမိလို့ ဇင့်ကို စိတ်ပူစွာ ဇင့်ဘက်ကို လှည့်အကြည့်.. ကျွန်တော့်အိပ်ယာဘေးမှာ ဇင် မရှိ။
နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့.. နံနက် ၇နာရီ ထိုးနေပြီ။ အိပ်ယာက ကမန်းကတန်းထပြီး ဇင် များ ရေချိုးနေတာလားလို့ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ကြည့်တော့.. ဇင် မရှိ.. အိမ်အောက်ထပ်ကို ဆင်းပြေးပြီး ဧည့်ခန်းရော မီးဖိုချောင် အကုန်ရှာသော်လည်း ဇင် မရှိပေ။ အိမ် တံခါးကို သွားကြည်မိတော့ တံခါးစေ့ထားတယ်။ အိမ်ရှေ့ကို ပြေးထွက်ကြည့်တော့ အိမ်ခြံစည်းရိုးတံခါးမှာ ကျွန်တော့်သော့ တန်းလန်းနဲ့ ဇင် ကျွန်တော့သော့ကို ယူပြီး အိမ်တံခါးကော ခြံတခါးပါ ဖွင့်ပြီး ပြန်သွားတာ ဖြစ်မယ်။
သော့ကို လှမ်းယူဖြုတ်မယ် အလုပ် ခြံတံခါးမှာ စာတစောင်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ စာကို အမြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဇင် ရေးထားတဲ့ ဇင့်စာရယ်ပါ... ကျွန်တော့် စိတ်ပူပြီး ပျာပျာသလဲ အမြန်ဖတ်မိလိုက်တော့တယ်...
လူတိုင်းလူတိုင်း သူတို့ရဲ့ ဘ၀မှာ ချစ်ရတဲ့ သူတွေရှိပေမဲ့ ..
တဘ၀မှာ တယောက်ပဲ ရှိပါတယ်... ဇင် .....ဇင့် ချစ်သူကို ...
အသက်နဲ့ကို ချစ်တာ..... မပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀တွေဆိုပေမဲ့.. ကိုယ်ချစ်တဲ့....
သူနဲ့သာ..ပေါင်းဖက်ရခြင်း ဟာ... ဘ၀ရဲ့ ပြည့်စုံမှုလို့ ဇင် ခံယူတယ်...
ဇင် ဆုတောင်းပါတယ် ...
ကိုကြီးလဲ ... အချစ်သစ် နဲ့ အမြန်ဆုံး ဆုံဆည်းပါစေလို့
ကျွန်တော် ခြံတံခါးကို မှီလှဲပြီး ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော် ဇင့်ကို ချစ်တယ်။ နှလုံးသားထဲကကိုချစ်တာ… ဇင်..ရယ်... ကိုကြီးလည်း တစ်ဘ၀မှာ တစ်ယောက်တည်း ချစ်တာပါ... ကိုကြီး ရဲ့ တစ်ဘ၀မှာ အချစ်ဆုံး တစ်ယောက်တည်းကို ပြပါဆိုရင်... အဲဒီ မိန်းကလေးဟာ.. ဇင် ပဲလေ.... အဲဒီအတွက် ဇင် ကိုကြီး အပေါ်မှာ လုပ်သွားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေက တရားလား ဇင်ရယ်... ကိုကြီး ဘယ်သူကို တိုင်တည်ရမှာလဲ... ကိုကြီးမှာ အင်အားတွေ ကုန်ခမ်းသွားပြီ ဇင်ရယ်..... ကျွန်တော့် ပါးပေါ်တွင် မျက်ရည်တွေ စီးကျလို့ လာတယ်... ဒါ ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ အချစ်ကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည်ပါပဲ.....။
ဆေးခွင့် ယူထားရာကနေ အလုပ်ပြန်ဆင်းတဲ့နေ့မို့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အသစ်တွေဖြစ်နေသလို လူတွေက ကျွန်မကိုကြည့်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ မလုံမလဲဖြစ်နေမိတယ်။ အဆိုးဆုံးက ရုံးကလူတွေ လာလာပြီး.. သက်သာသွားပြီလား.. ဘာလို့ ခွင့်ရက်အပြည့်မယူတာလဲ.. မေးရင် ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဖြေရမှန်းကို မသိလို့ ပြုံးပဲပြလိုက်မိတယ်။ ဒီလိုမေးလာတဲ့ အထဲမှာ မျိုးကျော်တော့ ပါမလာခဲ့ပါ။ ဘောပင်းလေးကို ပါးစပ်မှာကိုက်ရင်း.. သူ့စားပွဲဘက်ကို အသာခိုးကြည့်မိတယ်။ သူငူငူကြီး ထိုင်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ မျက်နှာလေး ကျသွားသလို အရင်ကသပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်စားတတ်တဲ့ သူ.. ခုတော့ ကပိုကရိုနှင့်..။ ထိုင်နေတာလဲ ကြည့်ပါအုန်း.. စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နှယ်.. ပုံပျက်ပန်းပျက်။
မျိုးကျော်ရယ်.. နင် ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား ဟင်။ ငါ့ရင်ထဲမှာ နင့်ကို ခွင့်လွှတ်တာ မမြင်ဘူးလား.. နင်မြင်အောင် ငါ ပြရမှာလားဟယ်.. တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင် နင့် အပြစ်တွေမဟုတ်ပါဘူး... နင်ဟာ ယောက်ျားပီသသလို အရည်အချင်းရှိပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ.. တည်ကြည်တယ်၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သလို… နင်ဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ မထင်မှတ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကနေ နင် ငါ့အပေါ်စိတ်တွေပြောင်းသွားပြီး အရိုင်းအစိုင်း တစ်ယောက်လို ဖြစ်သွားပေမဲ့.. ငါ့ရင်ထဲ တဖြည်းဖြည်း ၀မ်းသာလာပေမဲ့.. နင်ငါ့ကြောင့် ခုလိုဖြစ်သွားတာကိုတော့ မမြင်ရက်ဘူးဟယ်... နင့် စိတ်တွေ ဒီလောက်အထိ ပျော့ညံ့မယ်လို့.. ငါ့ကို ဒီလောက်ထိတောင် စွဲလမ်းသွားမယ်ကို မထင်ခဲ့လို့ပါဟယ်..
“ အစ်မ.. အစ်မ အလုပ်မဆင်းတုန်းက အလုပ်ကိစ္စတွေကို သမီးတတ်နိုင်သလောက် လုပ်ထားတယ်.. ခု ကုမဏီက လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ အပြင်ကို မှာဖို့ ရက်ကနီးနေပြီ.. ဒါပေမဲ့..”
အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကျွန်မအောက်က စာရင်းကိုင်မလေးပါ။ သူ့ကိုယ်သူ သမီး သမီးနဲ့ ပြောတတ်တယ်… ငယ်လည်းငယ်သေးလို့ပါ.. သူ ကျွန်မ စားပွဲနားလာပြီး တိုးတိုးလေး လာကပ်ပြောနေတယ်။
“ အေးး. ညီမလေး ပြောလေ...”
“ ကျွန်မတို့ ဆီကို အဆင်သင့် အပြင်ကိုမှာဖို့ တချို့စာရင်းတွေ မေးလ်က ၀င်လာပေမဲ့... ကိုမျိုးကျော်ဘက်က စာရင်းက ၀င်မလာသေးဘူး အဲဒါ.. သမီး သွားပြီး အသိပေးမလို့.. အစ်မကို အရင်လာပြောတာပါ ”
“ရတယ် ညီမလေး.. အစ်မ သူ့ကို သွားပြောလိုက်ပါမယ်..”
ကျွန်မစိတ်ထဲ ၀မ်းသားသွားတယ်.။ မျိုးကျော်နဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်းရှာပြီး သွားစ စကားပြောရမလဲ စဉ်းစားနေတာ အလုပ်အကြောင်းက ပေါ်လာတော့ မျိုးကျော်ဘက်ကို တစ်ချက်အသာလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီး မိမိ အိတ်ထဲမှာ မိတ်ကပ်ဗူးကို ထုတ် မိတ်ကပ်ဗူးထဲက မှန်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှရဲ့လား၊ သူကြည့်လို့ အဆင်ပြေပါ့မလားလို့ လူမမြင်အောင် ခိုးကြည့်နေမိတယ်။ ပြီးတော့မှ မျိုးကျော်ဆီ ထသွားပြီး...
ဘာတွေတွေးနေလဲ မသိ.. ကျွန်မခေါ်လိုက်တော့ သူ တစ်ချက်လန့်သလို တုံ့သွားပြီး ကျွန်မကို ဆက်ကနဲ့ကြည့်ပြီးမှ အကြည့်လွှဲခါ..
“နင်တို့ စာရင်းတွေ မပို့သေးဘူးနော်.. မနက်ဖြန်နောက်ဆုံးလေ... အဲဒါ.. ”
“အေး.. စိတ်ချပါ... ဒီနေ့ ပြီးအောင်လုပ်ပြီး မနက်ဖြန် မနက်ရအောင် ပို့လိုက်မယ်...”
ဟယ်... ကြည့်စမ်း.. ငါ့ကိုတောင် မကြည့်ဘဲပြောနေပါလား... စကားကို ဆုံးအောင်လည်း နားမထောင်ဘူး.. ငါ့မှာ အလာပသလာပ စကားလေးတွေပြောဖို့ စဉ်းစားထားတာလေးတွေတောင် ဘယ်လိုဆက်ပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။ ငါ့မှာတော့ အရှက်မရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့ လာပြောရသေးတယ်.. ဒင်းက..
အိုးကမပူ စလောင်းကပူနေတယ်.. ကြည့်နေရင်း စိတ်ကမရှည်ချင်တော့လို့ ဆွဲသာကိုင်ဆောင့် လိုက်ချင်တော့တယ်။ မျိုးကျော်ရှေ့မှ စိတ်တိုတိုနှင့် ထွက်လာခဲ့တယ်။ တစ်နေကုန် ကျွန်မရဲ့ မျက်လုံးတွေက မျိုးကျော်ဆီသာ ရောက်ရောက်လို့နေတယ်။ မျိုးကျော်ကိုခုမှ သေချာကြည့်မိတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်လို့ကိုသေချာ မြင်လာသလို သူ့ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းမှာ သူ့လက်လေးတွေနဲ့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တာလေးကို တွေးလေ.. မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်လာသလို ရင်တွေတအားခုန်လာတယ်။
မျိုးကျော်ရယ် နင်နဲ့ ငါ အတူနေချင်တဲ့ စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဟာ.. ငါတို့ပြန်စလို့ရပါတယ်..။ အဲလောက်ထိ ငါ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ မခံစားစမ်းပါနဲ့.. စိတ်တွေ မလှုပ်ရှားစမ်းပါနဲ့ဟာ။ ငါတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့လို့ရတယ်လေ။ နင် တစ်ခါငါ့ကို လုပ်သွားတဲ့ ပုံစံလေး နောက်တစ်ခါလောက် ငါခံချင်နေမိပြီဟယ်။
မျိုးကျော်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တွေးနေလို့ထင်တယ်.. ကျွန်မရဲ့ ရွှေခရုလေးကလည်း အရေတွေစို့ လာလို့ထင်တယ်... ယားလာပြီး ကိုယ်လေး နည်းနည်း လှုပ်လိုက်တာနဲ့ ရွှေခရုလေးက နှုတ်ခမ်းသားတွေ နုစ်ခုက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ အချင်းချင်းပွတ်တိုက်ပြီး ကျွန်မကို စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပွတ်တိုက်နေသလိုလို ဖြစ်လာလို့ မနေနိုင်တော့ဘဲ သန့်စင်ခန်းထဲသွားပြီး ဆေးလိုက်ပါတော့တယ်....။
အရက်ခွက်ကို တွေဝေငေးမောစွာ စိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ အိမ်လည်း မပြန်ချင်သေးပါ... အိမ်ပြန်လိုက်ရင်လည်း အိပ်ခန်းထဲမှာ ဇင့် အနံ့အသက်.. ဇင့် အရိပ်တွေကြီးပဲမို့ မခံစားနိုင်လို့ပါ ... ဒီဆိုင်လေးမှာလာပြီး အရက်သောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မေ့လိုက်တော့တဲ့ .. မေ့ဖို့သင့်တဲ့ ကိစ္စလား ဇင်ရယ်...
အရက်ကို တစ်ခွက် မော့သောက်လိုက်တယ်... ကိုကြီးဘ၀မှာ နုလုံးသားတစ်ခုလုံးကော ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းကော အပြင်ကော အရင်းနီုးဆုံးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့... မေ့ပြစ်ဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့ အကြောင်းကို ပြေဖို့ရန် စကားတောင် မရှိလို့ပါ။ အနာဂတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင်တောင် ဇင် နဲ့ ကိုကြီး အဖြစ်ပျက်လေးတွေက အသည်းမှာအနာကျန်လို့ တနုံ့နုံ့ခံစားနေရမဲ့ အဖြစ်ပါ။ ကိုကြီးရဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးထဲ လာဝင်ကြည့်ပါအုန်း ဇင်ရယ်.. ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ဇင် အကုန်ယူသွားပြီ ဇင်ရယ်...
အရက်အရှိန်လေးကလည်း တက်လာတာမို့ ရင်ထဲက ဒဏ်ရာတွေ သက်သာလို သက်သာငြား တစ်ခုခုကိုပေါက်ကွဲပစ်ချင်လာလို့ပါ။ ဇင့် အကြောင်းကိုတွေးရင်းမှ ကျွန်တော့်စိတ်က ဒေါသထွက်လာတယ်.. ဟုတ်တယ်... ကျွန်တော့်က စတယ်ဆိုပေမဲ့ သူက ကိုယ့်ကို မလုပ်နိုင်အောင် ရစ်နွယ်ခဲ့တာ... လူတစ်ယောက်ကို မချစ်ရင်လည်း ဘာလို့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေးရတာလဲ... မရဘူး.. ဇင်နဲ့ ကျွန်တော်ကြား တစ်ခုခုတော့ နောက်ထပ် အဖြူအမည်း သဲကွဲစေချင်တာမို့.. အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ကာ အရက်လက်ကျန် အကုန်မော့ပြီး ဇင့် အိမ်ဘက်ကို ကားလေးနဲ့ ထွက်လာတော့သည်..။
ဇင်တို့ ရပ်ကွက်ထိပ်ရောက်တော့ နာရီကို မနည်းပြူးပြဲ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ဆယ့်တစ်နာရီ ကျော်ပြီ။ ကားကိုလမ်းဘေးမှာပဲ ရပ်ထားခဲ့တယ်။ ကားပေါ်က ဆင်းဆင်းချင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိထားလိုက်တယ်.. ငါ အရမ်းမူးနေလား.. မူးတော့မူးပါတယ် ဒါပေမဲ့ ထိန်းနိုင်ပါသေးတယ်။ လမ်းလည်း ကောင်းကောင်းလျှောက်နိုင်လို့ ဇင့် အိမ်သို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ခွေလေခွေးလွင့်တွေ ကျွန်တော့်ကို ဟောင်နေတာလွဲလို့ လူတစ်ယောက်မှမရှိ။
ဇင့် အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ဇင့် အိမ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရာ ခြံတံခါးပိတ်ထားပေမဲ့ အိမ်တံခါးမကြီး ဖွင့်ထားသဖြင့် အိမ်ထဲကို အနည်းငယ်မြင်နေရတယ်။ ဇင့်ညီမလေး ခုံပေါ်မှာစာကျက်နေတာကို တွေ့ရပေမဲ့ ဇင့်ကိုတော့ မတွေ့ရ။ သက်ပြင်းလေးချပြီး အိမ်ရှေ့ကရပ်စောင့်ပြီး ကြည့်နေပေမဲ့ ဇင့်ရဲ့ အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ရပေ။
ဇင့် အိမ်ဘက်ကို ကြည့်နေတုန်း… လမ်းဘက်မှာ လူနှစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဘက်လမ်းအတိုင်း လျှောက်လာလို့ ဇင့် အိမ်ရှေ့မှာ ဒီလိုရပ်ကြည့်နေလို့ မကောင်းတာနဲ့ လမ်းလျှောက်ဟန်နဲ့ သူတို့ကို ရှောင်တဲ့ ပုံလည်းမပေါက်အောင် သူတို့နဲ့ မျက်နာချင်းဆိုင် လျှောက်လိုက်တယ်။ အနီးနားရောက်တော့ သူတို့တွေ ကျွန်တော့်ကို သေချာအကဲခတ်နေဟန်ဖြင့် ကြည့်နေတယ်။ သူတို့ကိုကြည့်ရတာ ခပ်ငယ်ငယ်တွေပါ နှစ်ဆယ်ကျော် အရွယ်လေးတွေဖြစ်ပြီး သူတို့လည်း မူးနေဟန်ပါပဲ။ သေချာအနီးကပ် ကြည့်လိုက်တော့မှ ရပ်ကွက် ကလေကချေဆေးသမားပုံတွေပါပဲ။ ကျွန်တော့်သူတို့ဘေးမှ ဖြတ်သွားတော့ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းတားပြီး...
“အစ်ကို.. မီးခြစ်ပါလား ခင်ဗျာ...”
“မပါဘူး ညီလေး.. အစ်ကိုဆေးလိပ်မသောက်ဘူး... ဆောရီး..”
“အစ်ကိုဒီရပ်ကွက်ထဲကလား...” စပြီ... ဒီကောင်တွေ စရစ်တော့မယ် ထင်တယ်။
“မဟုတ်ပါဘူး.. ညီလေးရ ..သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာရှာတာပါ..”
“သူငယ်ချင်းလာရှာတာ ဟုတ်လား.. ခင်ဗျားကြီးကလည်း ဒီအချိန်ကြီးမှ လာရှာရတယ်လို့.. ဘာတွေလဲဗျ.. ဘာလဲ ကျုပ်တို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ လမ်းကြောင်းတွေရှိလား ဇယားတွေ ဘာတွေရှိလို့လား......”
အနည်းငယ်ပိုမူးနေဟန် နောက်တစ်ယောက် မျက်နှာထားခပ်တင်းတင်းနဲ့ ၀င်ပြောနေတယ် ..
“ဟာကွာ မင်းကလည်း... ဧည့်သည်ကို အဲလိုမပြောရပါဘူး..ကွ... ဆော်ရီးအစ်ကိုရာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဒီနေ့ တအားလန်းနေလို့ပါ... ”
“ရပါတယ် ညီလေး.. အေးဆေးပါ...”
ကျွန်တော်လည်း ပြဿနာလည်း မဖြစ်ချင်တာနဲ့ ကောင်းကောင်းပဲ ပြန်ပြောပြီး လှည့်ထွက်မယ် အလုပ်..
“နေပါအုန်း အစ်ကိုရဲ့ အစ်ကိုပုံကြည့်ရတာ လူကြီးလူကောင်းပုံထဲကပါပဲ။ နောက်တစ်ခါ ဒီလို ညကြီးအချိန်မတော် မလာပါနဲ့ဗျာ.. ကျွန်တော်တို့က ဒီရပ်ကွက်ထဲက ကာလသားတွေပါ...”
“ဟုတ်ပြီ ညီလေးတို့ရာ...” ပြဿနာတော့ စတော့မယ် ထင်တယ်.... အတတ်နိုင်ဆုံး သည်းခံပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်..
“ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုမှတော့ သဘောမထားပါနဲ့.. ဒီက အစ်ကို့ညီတွေကို အရက်ဖိုးလေးတော့ မစခဲ့ပါအုန်း...ဟဲဟဲ..”
စိတ်ထဲ ထောင်းကနဲ ဖြစ်သွားတယ်.. လက်စသတ်တော့ အနုနည်းနဲ့ ဓားပြတိုက်နေတာပဲ.. မူးနေပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကို သတိကပ်ပြီး အသင့်အနေအထားနဲ့.. သူတို့ကို သေချာကြည့်ရင်း ....
“ညီလေးပြောတာ အစ်ကိုမရှင်းဘူး... ”
“အဟာ... အစ်ကို မပေါက်ဘူးထင်တယ်.. ကျွန်တော်တို့ လမ်းကြေးကောက်ခံနေတာလေ.. လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံနေတာ.. ဘယ်လောက်မှ မများပါဘူး.. သုံးသောင်းထဲပါ.... ဟဲဟဲ...”
ဒီတစ်ယောက်ကတော့ သွေးအေးအေးနဲ့ ရယ်မောပြီးပြောနေတယ်... ကျွန်တော် ဒေါသထွက်လာတယ်.. ဆက်သည်းမခံနိုင်တော့လို့....
“ဘာလဲ မင်းတို့က ငါ့ကို ဓားပြတိုက်နေတာလား.... လမ်းကြေးကောက်ရအောင် မင်းတို့က စည်ပင်မှာ အမှိုက်ကောက်နေတဲ့ ကောင်တွေလား....”
“ဟာ.... ဒီနွားကြီးက ... လမ်းထဲလာပြီး သေချင်လို့ထင်တယ်.... နှမ--ိုးက... ဟေ့ကောင်... ကိုင်ကွာ ကြာတယ်... ”
ပြောပြောဆိုနှင့် နောက်တစ်ယောက်က ပေါက်ကွဲပြီး ကျွန်တော့်ဆီပြေးလာပြီး စတင် ထိုးပါတော့တယ်။ ပြဿနာကို သိနေတယ်။ ရန်လည်းဖြစ်တော့မှာကို သိနေတဲ့အတွက် မူးနေပေမဲ့ ကျွန်တော့်သတိကြီးစွာကပ်ပြီး သူတို့စရင် ပြန်လည်တုံ့ပြန်အဖို့အတွက် ကြည့်ပြီးသားပါ။ အညာက အဖေ့ညီ ကျွန်တော့်ဦးလေး ကိုယ်တိုင် ငယ်ငယ်ကနေ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ သင်ပေးဖူးတဲ့ ကိုယ်ခံပညာကလည်း အတော်အသင့်တတ်ထားသမို့ နှစ်ယောက်တစ်ယောက်လောက်တော့ ကြောက်စိတ်မရှိတာ အမှန်ပါ။ သူ အရှိန်နဲ့ ခြေကားရား လက်ကားရား ၀င်လာလို့ ကျွန်တော်အသင့်အနေအထားနဲ့ ခါးကို နောက်သို့ အနည်းငယ်ယိုင်ပြီး ညာခြေကို ဆန့်ထုတ်ပြီး ဒဲ့ဖနှောင့်ပုံစံနဲ့ ဒီကောင့် မေးစေ့အောက်တည့်တည့်မှာ ပင့်ဝင်ပြီး ကန်ထည့်လိုက်ရာ ..“ အု..” ဆိုပြီး အသံတစ်သံသာ ကြားလိုက်ရတယ်... ဘေးတွင်ဆန့်ဆန်ကြီး လဲသွားတော့တယ်။ ကျန်တဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ဓားမြတိုက်တဲ့ ကောင်က ကျွန်တော့်ကိုသေချာကြည့်နေတယ်.. ဒီဘဲကြီး မခေဘူးပေါ့.. ရမ်းမ၀င်သေးဘဲ လက်သီးကိုဆုပ် ချိန်ရွယ်နေရင်းမှ အော်ပြီး တစ်ချက် ၀င်လာထိုးတော့ ကျွန်တော် အသာရှောင်လိုက်ပြီး... သူဟန်ချက် အနည်းငယ် ပျက်နေတုန်း ကျွန်တော့် ဘယ်ဝိုက်လက်သီးနဲ့ ထိုးတော့မယ် ဖိန့်ပြလိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့် ဘယ်လက်သီးကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အကာ.. လွတ်နေတဲ့ ရင်ညွန့်နေရာကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ညာလက်သီးနဲ့ ကိုယ်အား ပခုံးအား လက်အားရောပါ လက်သီးတွင်စုပြီး တစ်ချက်တည်း ပင့်ထိုးလိုက်ရာ.. နေရာတွင်ပင် အသံမထွက်နိုင်တော့ဘဲ ခွေခွေလေး ဗိုက်နှိပ်ပြီး လဲကျသွားတော့တယ်။
လမ်းထိပ်လက်ဖတ်ရည်ဆိုင်က ဒီကောင်တွေရဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေပဲ ဖြစ်မယ်.. ကျွန်တော်တို့ ရန်ပွဲကို မြင်သွား၍ သူတို့လူကို ကူရန် အယောက် နှစ်ဆယ်လောက်ပြေးလာတာကို တွေ့လိုက်ရတော့တယ်... ဒီလူအင်အားနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဘယ်ကတောင် အသက်ထွက်ရမှန်းမသိမို့ ကျွန်တော်မူးနေတဲ့ကြားက သုတ်ခြေတင် ပြေးရတော့တယ်။ တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက် ပြေးနေရတာ နောက်ဆုံးမောလာသလို ဒီလူအုပ်ကြီးနဲ့ လွတ်မှာ မဟုတ် ... ကျွန်တော်ဆက်ပြေးမယ့် တစ်ဖက်လမ်းမှာလည်း အသံတွေကြားနေရပြီး လမ်းက သူတို့ ပိတ်မိတော့မှာမို့ ... နောက်ဆုံး မကြံနိုင်တော့တာနဲ့ အရဲစွန့်ပြီး နီးရာအိမ်ရဲ့ခြံစည်းရိုးကို ကျော်ဝင်ပြီး ပုန်းနေလိုက်တော့တယ်။
ဇောကြောင့်ထင်ပါတယ်။ ရင်ညွန့်လောက်ရှိတဲ့ ခြံစည်းရိုးကို ဘယ်လိုကနေဘယ်လို ခုန်ကျော်လို့ ၀င်နိုင်ခဲ့မှန်းမသိ။ ဘယ်လောက်မှမကြာလိုက်၊ နောက်က လိုက်လာတဲ့ လူတစ်အုပ် ဆူညံပွက်လောရိုက်အောင် ကျွန်တော့်ကို တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက် ရှာနေလေပြီ။ ခုန်ဝင်လိုက်တဲ့ ခြံကလည်း သစ်နဲ့ ကာရံထားတဲ့ ခြံစည်းရိုးဆိုပေမဲ့ ရွက်လှပင် ခပ်မြင့်မြင့်တွေကြောင့် သူတို့ အိမ်ထဲကို အလွယ်တကူ မမြင်နိုင်ပေ။ အိမ်တွေရဲ့ ခြံထဲထိ ၀င်မရှာတာ ကံကောင်းလှသလို သူတို့လည်း ကျွန်တော်ခြံထဲ ခုန်ဝင်သွားတာကို သိပုံမရ။ ခြံထောင့် ရွက်လှပင်တွေအကွယ်နဲ့ အတူ အိမ်ထဲကကြည့်ရင်လည်း ရေကန်အကွယ်နဲ့မို့ ပုန်းလို့ကောင်းတဲ့ နေရာဖြစ်နေလို့ တော်သေးသည်။ ခြံအပြင်ကို နားစွင့်နေရသလို ခြံထဲက အိမ်ကိုလည်း မျက်လုံးပြူးနေအောင် ကြည့်နေရသေး။ တော်ကြာ အိမ်ရှင်နိုးလာလို့ ကျွန်တော့်မြင်မှ သူခိုးထင်ပြီး အော်မှ ပြေးပေါက်ပျောက်မှာ သေချာသည်။
အချိန်နည်းနည်းကြာတော့ အားလုံးငြိမ်သွားပြီး အထင်နဲ့ အသာထ ခြံးစည်းရိုးကျော်ပြီး ထကြည့်မယ်လုပ်တော့ ဟိုကောင်တွေ အဖွဲ့ထဲကပဲထင်တယ် နှစ်ယောက် ပျာပျာနဲ့ ဖြတ်ပြေးသွားလို့ အသာပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ ၀ူးးးး ဒီပုံအတိုင်းဆို ထွက်လို့ ရမည်မဟုတ်.. ဒီအတိုင်းဆက်ပုန်းနေမှ ဖြစ်မယ်ဟုတွေးပြီး လူလည်း ပင်ပန်းနေပြီမို့ ဖင်ချထိုင် နားလိုက်တော့တယ်။ အချိန်က ကြာလာတော့ ကိုယ်တွေလက်တွေ ကိုက်ခဲလာသလို အရက်သောက်ထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် လူက အိပ်ချင်လာတယ်။ အပြင်ကို နားစွင့်တော့ မကြားတစ်ချက် ကြားတစ်ချက်။ ခြံစည်းရိုးကိုမှီပြီး မှေးနေရင်းမှ တစ်ချက် မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်။
အသံတစ်ခုကြောင့် သတိတစ်ချက်ဝင်လာပြီး တစ်ချက်လန့်သွားတယ်။ ခြံစည်းရိုးတံခါးကို ဖွင့်နေတဲ့ အသံပါ။ လူကို ခေါင်းနပန်းကြီးသွာတယ်။ ဟိုကောင်တွေများ ငါ ဒီမှာ ရှိနေတာ သိသွားပြီလားလို့ ခြံထောင့်ကနေ ခြံအတွင်း အုတ်ကန်လေး အကာအကွယ်ယူပြီး ချောင်းကြည့်နေမိတယ်။ ၀င်လာပြီ လူတစ်ယောက် ကုပ်ချောင်း ကုပ်ချောင်းနဲ့ အမှောင်ထဲ မသဲမကွဲမို့ သေချာစိုက်ကြည့်နေတုန်း ကျွန်တော့်ဘက်ကို လာနေတယ်။ ဆက်ကနဲ ချောင်းကြည့်နေရာမှ အုတ်ကန်ဘေး အသာဝပ်နေလိုက်တယ်။ နောက် လှုပ်ရှားမှု အသံပျောက်သွားလို့ အသာပြန်ထကြည့်တော့ ကျွန်တော်ပုန်းနေတဲ့ အုတ်ကန် ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ လူတစ်ယောက် ကျွန်တော်ဘက်ကို ကျောပေးပြီး ရပ်နေတယ်။ အမှောင်ထဲ ခပ်ရေးရေးပေမဲ့ သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ မိန်းကလေး တစ်ယောက်မှန်းသိလာတယ်။
ဘယ်လောက်မှ မကြာ အိမ်ပေါ်မှ လူငယ်တစ်ယောက် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနဲ့ဆင်းလာပြီး စောင့်နေတဲ့ ကောင်မလေးလက်ကို ဆွဲပြီး ခြံအတွင်းခပ်လှမ်းလှမ်းက ရေစင်နားတွင် နှစ်ယောက်သား တိုးတိုးနှင့် နောက် ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို အတင်းနမ်းနေတယ်။ ကောင်မလေးက အတင်းရုန်းနေတယ်။ ကောင်လေးကနောက်တဆင့်တက်ပြီး ကောင်မလေးရဲ့ နို့ကို လှမ်းကိုင်ပြီး ဖျစ်ညစ်ဆုပ်နယ်နေတော့ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို စိတ်ဆိုးပြီး ပါးရိုက်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကောင်လေးအတော်ထိသွားတယ် ထင်တယ်။ ပါးလေးကို လက်ကလေးနဲ့ အုပ်ပြီး ငြိမ်နေသလို ကောင်မလေးကို စိတ်ဆိုးတဲ့ အမူအယာပြနေတယ်။ ကောင်မလေးလည်း ကောင်လေးပါးလေးကို ပြန်ကိုင်ပြီး တောင်းပန်နေတယ်။ ကောင်လေးက ချက်ချင်း စိတ်ဆိုးမပြေသေးပေမဲ့ နောက်တော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ပြန်ဖက်နမ်းပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေး နုိ့တွေတင်မကဘူး ကောင်မလေးရဲ့ ဖင်တွေကို နှိုက်ပြီး ဆုပ်နယ်နေတယ်။ ကောင်မလေးလည်း ရုန်းနေတယ် ဆိုပေမဲ့ အင်အားမရှိဟန်နဲ့ ကောင်လေးလက်တွေကိုသာ ဟန်နဲ့ အတင်းဖယ်နေတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကောင်လေးက ကောင်မလေးလက်ကိုဆွဲပြီး ရေစုပ်စက်ထားရာ အခန်းမှ တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ အခန်းထဲက မီးရောင်က လင်းကနဲလင်းလာလို့ သူတိုိ့ကို မြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ထဲ မိုးကြိုးပစ်လိုက်သလိုပါပဲ။ မြင်လိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေးက တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် သိပ်ချစ်ရတဲ့ ဇင် ရယ်ပါ။ ဇင့်ကို ကောင်လေးက ရေစုပ်စက်ထားရာ အခန်းထဲ အတင်းဆွဲခေါ်လိုသာနေတယ်။ နောက်ဆုံး ဇင် အခန်းထဲပါသွားပြီး တခါးပိတ်သွားတော့.. ကျွန်တော်အနားနားကပ်ပြီး ရေစုပ်စက်ခန်း အနောက်လေ၀င်ပေါက်လေးများမှ ချောင်းကြည့်လိုက်မိတော့တယ်။
“မောင်.... အာ .... မောင်နော်. မလုပ်ပါနဲ့.. ဇင် ကြောက်တယ်... အာ.... ဇင် မကြိုက်ဘူးနော်.... ”
“ဇင် ရယ် မောင်ချစ်လို့ပါ.. မောင်တို့က ရည်းစားတွေပဲ...”
“အာ... မောင်ရယ် ဇင်တို့က မယူရသေးတာကို.... ဇင် မလုပ်ရဲဘူး... မောင်ရယ်...ဇင်ကြောက်တယ်လို့ ပြောနေတယ်နော်...”
အို....ဟိုးးးး... ဇင်အတင်းရုန်းနေတာ တကယ့်အပျိုရိုင်းလေး ကျနေတာပဲ။ ကောင်လေးရဲ့ လက်တွေ ဇင့် ထမီကို အတင်းဆွဲမြောက်လိုက်တာကြောင့် ဇင့် ပေါင်တွေပေါ်လာတာကို လက်နဲ့ နှိုက်ပြီး အတင်းပွတ်သပ်နေသလို ဇင့် နို့တွေကိုလည်း နှိုက်လို့နေနေပြီ။ စက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို ကောင်လေးက ဇင့်ကို အတင်းလှဲချနေပြီ။ ဇင် အတင်းလူးလဲပြီး ကောင်လေးကို တွန်းထိုးနေတဲ့ ကြားက ဇင်အောက်ကို ရောက်သွားတယ်။ ဇင် သူထမီကို အတင်းဖုံးနေသလို ကောင်လေးဆွဲချွတ်လို့ နို့တစ်ဖက်ပင်ပေါ်နေတဲ့ သူရဲ့မလုံမလဲ ကိုယ်လေးကို အတင်းဖုံးဖိနေတယ်...
“မောင် ... ဇင်ပြောနေတာ မကြားဘူးလား... ဇင် တောင်းပန်ပါတယ်... မောင်ရယ်... ဒီလိုတွေ လုပ်ပြီးရင် မောင် ဇင့်ကိုပစ်ခဲ့မှာ....”
ဇင်ပြောလိုက်တော့ ကောင်လေး တစ်ချက်ရပ်သွားပြီး....
“ ဇင်..... မောင့်ကို အဲလိုလူမျိုးထင်နေလား... မောင်တို့ ချစ်လာတာ ၃ နှစ်တောင် ပြည့်တော့မယ် သူများ ချစ်သူတွေ ဒီလို အခွင့်အရေးရတယ်... မောင်ပြောထားတယ် နော်... ဒီတစ်ခါမှ ဒီအခွင့်အရေး မရရင် မောင်ပြောထားသလို မောင် တို့ ချစ်ခြင်းပြီးပြီ...”
“မောင်..ရယ်... ခက်ပါပြီ... ဇင် ကြောက်လို့ပါဆို... ဇင် လည်း မောင့်ကို ချစ်လို့ပါ..”...
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲ ကောင်လေးက ဇင့် နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုပါ ပေါ်အောင် ချွတ်ပြီး စို့နေတော့တယ်.... လက်ကလည်း ထမီကို အသာအယာပြန်ချွတ်နေတော့တယ်... ဇင့်ပေါင်လေးတွေ တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်.. ဇင်ကတော့ အောက်က ရုန်းတယ်ဆိုရုံလေးနဲ့ မျက်နှာကလည်း မဲ့နေတယ်။ အော် ဇင်ရယ်.. မင်းကတော့ တကယ် ထိပ်တန်း သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါလား။ ကြည့်နေရင်း ကောင်လေးက ဇင့် ထမီကို အထက်ထိ တွန်းတင်ပြီးတဲ့ နောက် ဇင့် ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်လာတော့ ဇင် ကုန်းထလာတယ်။ မျက်နှာမှာလည်း မျက်ရည်တွေနဲ့ သူ့ကောင်လေးကို နမ်းနေတယ်...။ ကောင်လေးက မရဘူး အတင်းချွတ်လို့သာနေနေတယ်။
“မောင်..... ဇင့်ကို သနားပါအုန်း မောင်ရယ်... ဇင် ကြောက်လို့ သေတော့မယ်နော်....”
“၀ူးးးးး.. ဇင်ရယ် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး.....”
“ဘာ ..ဘာမှမဖြစ်မှာလဲ.... နာမှာ မောင်ရယ်... ဇင် သူငယ်ချင်းတွေ ပြောတာ.. သေအောင် နာတာတဲ့.... မလုပ်နဲ့ မောင်ရယ်.... တော်ပါတော့နော်... ဇင် ရှစ်ကြီး ခိုးပါတယ်... အဟင့် အဟင့်...”
ဇင် ငိုနေလေပြီ ... ကြည့်ရင် ကျွန်တော်ရယ်ချင်လာမိတယ် ... စိတ်လည်းနာလှပြီ။ ကောင်လေးကတော့ လျော့မယ် ဟန်မတူ.. ဇင့် ဘောင်းဘီအနီလေးကို ချွတ်လိုက်တာ ဒူးနားတောင် ရောက်လို့လာပါတော့တယ်...။
ဇင့် ဘောင်းဘီလေး ဒူးလောက်ရောက်တော့ ဇင် ကုန်ရုန်းပြန်ထလာပြီး မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက်နဲ့ အတင်းငြင်းဆန် နေပြန်သည်။ ကောင်လေးက ဘယ်လိုနည်းမှ လက်လျော့မည် မဟုတ် မျက်နှာတစ်ခုလုံးချွေသီး ချွေးပေါက်များ နှင့် ဇင့် ထမီလှန်ထားလို့ ပေါ်နေသော ဇင့် ရွှေခရုလေးကို အတင်းကုန်းလို့သာကြည့်နေသည်။ ဇင် ကတော့အရမ်းရှက်ဟန်ပြပြီး သူ့ရွှေခရုလေးကို မကြည့်ရန် ကောင်လေးကို အတင်းတွန်းထုတ် ထမီလေးဆွဲချမယ် လုပ်တော့ ကောင်လေးက ယောက်ျားတို့ရဲ့ အားနဲ့ပဲ ဇင့်ကိုတစ်ချက် တွန်းလှဲပြီး ဇင့်ဘောင်ဘီလေး အပြီးတိုင် ချွတ်လိုက်တော့သည်။
“မောင်.. မောင်...မောင်..နော်...ဇင့်ကို အဲလိုတွေမလုပ်နဲ့ လေ.. မောင် မဟုတ်ဘူးနော်.. တော်ပြီ တော်ပြီ ဒီလောက်ကြည့်ရရင် လုံလောက်ပြီ.. မောင်ရယ်.. မလုပ်ပါနဲ့ တော့ ..ဇင့်ကိုသာသတ်လိုက် စမ်းပါ..”
“ဇင် နော်.. မောင် ဇင့်ကို အသက်လောက်ချစ်တာ ဇင်သိရဲ့သားနဲ့ မောင်ပြောထားတယ်.. မောင် ဇင့်ကိုပဲယူမယ် လက်ထပ်ပါမယ်လို့ ပြောထားတယ်နော်... ကြိုပြောထားမယ် အသံတွေ အရမ်းမထွက်နဲ့ အရမ်းလည်း မကျယ်ပါနဲ့ ဇင်ရယ်.. အိမ်ပေါ်မှာ အဖေနဲ့ အမေ.. အိပ်နေတာ ကြားသွားမယ်..”
ကောင်လေးကတော့ ပြောနေတဲ့ ဇင့်ပါးစပ်လေးကို လှမ်းစုပ်နမ်းနေတော့တယ်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဇင့်ရွှေခရုလေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး အထက်အောက် ပွတ်သပ်လို့ပေးနေတော့ရာ ဇင့်မှာ မျက်ရည်တွေကျလာပြီး...တရှုံ့ရှုံ့ငိုလို့သာ နေတော့တယ်။ ကောင်လေးကတော့ ဇင့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေကနေ တဆင့် ဇင့် နို့လေးတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပွတ်သပ်ဆုပ်ကိုင်လို့ နေရာ ဇင့်မှာ အောက်မှမခံမရပ်နိုင် ပုံစံဖြင့်လူးလှိမ့် နေရုံတင်မက ကောင်လေးရဲ့ ကျောပြင်ကို ထုလို့နေတယ်။ ကောင်လေးကတော့ သူ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း စပါပြီ။ ဖွေးဥနေတဲ့ ဇင်ပေါင်တွေကြား သူခန္ဓာကိုယ်ကို အတင်းဝင်ထပ်နေပြီး သူ့ပုဆိုးကိုလည်း ချွတ်နေလို့နေပြီ။ ကောင်လေးအစထဲက အစီစဉ်ရှိဟန်တူပါတယ်.. သူ အောက်ခံဘောင်းဘီတောင် ၀တ်မလာ။ ကောင်လေးရဲ့ ဒုတ်က ဇင့်ဆီးခုံပေါ်ထောက်လို့ ...ဇင့်မှာတော့ ကောင်လေး ရင်ဘတ်ကိုတွန်းနေလို့.. သူ့ခြေထောက်ကို ဖြောင်တန်းဆန့် ထုတ်ပြီး ကောင်လေးရဲ့ ပေါင်းကြားထဲ ၀င်ထားမှုကို ရုန်းကန်လို့သာနေတော့တယ်။ ကောင်လေးကလည်း ဇင်ရုန်းနေတဲ့ ကြားက မရမက အားနဲ့ ဇင့် ဒူးခေါင်းခွက်ကြား လက်လျှိုပြီး အတင်းဆွဲလှန်ပြီး ခြေထောက်တွေကို မလိုက်တော့ ဇင့်ရဲ့ ရွှေခရုလေးက လက်ကနဲ ပေါ်လို့လာတယ်။ ဇင် ဘယ်လိုမှ ရုန်းလို့မရဟန် နဲ့ ငိုလို့သာနေနေတယ်... ကောင်လေးက သူ့ဒုတ်ကို သူ့လက်နဲ့ ကိုင်နေလေပြီး ဇင့်ရွှေခရုနားလေး အတင်းတပ်လိုက်ပြီး စတင်ထိုးထည့် လိုက်ရာ ဇင့်မှာ နာလွန်းအားကြီးလို့ လွန့်လူး ရုန်းထပြီးအော်တော့မယ် ဟန်နဲ့ ပါးစပ်ဟလိုက်တာကို ကောင်လေးက လက်နဲ့ ပါးစပ်ကိုဖိအုပ် ဇင့်ကိုယ်လေးကို သူ့ကိုယ့်ခန္ဓာနဲ့ ဖိအုပ်ထားသလို ဖင်ကိုယ်လည်း ချုံ့ပြီး သူ့ဒုတ်ကို အဆုံးထိ အားကုန်ထိုးထည့်နေလေသည်။ ဇင် ကတော့ အသည်းခိုက်အောင်နာလှတဲ့ အမူအယာနဲ့ ကောင်လေးလက်နဲ့ ပါးစပ်ကိုအုပ်ထားတဲ့ ကြားမှာ ကောင်လေးအား မျက်ရည်စတွေနဲ့အတူ မျက်လုံးနီရဲခါ မျက်ထောင့်နီနဲ့ ကြည့်နေတယ်။
ကျွန်တော် အတော်လေးတွေဝေသွားတယ် ဇင်မှ ဟုတ်ပါ့မလားလို့။ ဒါပေမဲ့ ဇင်ပါ.. ကောင်လေးကို အသည်းစွဲအောင် တစ်သက်မမေ့အောင် နောက် သူ့အပျိုပျက်နေတဲ့ ဘ၀ကို ကောင်လေးမသိအောင် ထိန်းသိမ်းပြီး ဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါ ကောင်လေးရဲ့ ဇင့်အပေါ်ယုံကြည့်မှု၊ စွဲလမ်းမှု၊ ပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးလာမှုတွေကို အမိအရ ဖမ်းယူလိုက်တာပဲလို့ သဘောပေါက်တော့တယ်။ ဇင်ရယ်.. သဏ္ဌာန်လုပ် သရုပ်တူဆိုသလို အပီအပြင် သရုပ်ဆောင်နေသလားလို့ တောင်ထင်ရပါတယ်။ ပြောနေရင်း ကောင်လေး သူ့ဒုတ်ကို ထိုးထည့်ထားရမှ အနည်းငယ်ပြန်ထုတ်ပြီး ထပ်ဆောင့်ထိုးထည့်လိုက်ရာ...
“မောင် တော်တော့ တော်တော့.. သေပါပြီ အမေရယ်.. သေပါပြီ... ဟီးးးးးးးး... မောင် တော်တော့လို့ ဇင် ပြောနေတယ်နော်... အောင်မလေးးး..ဟီးးးး”
“ဇင်ရယ် ခဏလေးပါနော် ခဏလေးပါ..... မောင် ဇင့်ကို အရမ်းချစ်တယ်လေ.. သိပ်ချစ်တယ် ဇင်ရယ်..”
ပြောပြောနဲ့ ကောင်လေး ဆက်ခါဆက်ခါ ဖင်ကိုကော့ကော့ လုပ်နေလိုက်တော့ ဇင့်မှာ လူးလိမ့်နေလိုက်တာ အောက်မှာ သူမှာ နေစရာကိုမရှိ။ ကောင်လေးကတော့ ဆောင့်ထည့်နေရင် နို့လေးကိုပါ ဖျစ်ညစ်ရင်း ဇင့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းနေတော့ ....
“အ...အ....အား.... သေပြီ မောင်ရာ အီးး... ဟီးးးးးး အမေရယ်... အားး... ”
မကြာပါဘူး .... ကောင်လေး ဇင့် နှုတ်ခမ်းလေးကို အနမ်းရပ်ပြီး ဇင့် ရွှေခရုလေးနဲ့ သူ့ဒုတ် တစ်ချက်ချင်းဆောင့်ထည့်နေတာကို ခေါင်းငုံလျိုကြည့်ရင်း အားကုန်ဆောင့်ချက်နဲ့အတူ ကောင်လေးပြီးသွားတော့တယ်။ ကောင်လေးသူ့ဒုတ်ကို ချက်ချင်းမထုတ်သေးဘဲ ကျင်းစိမ်နေတဲ့ သဘောနဲ့ အမောဖြေနေတယ်။
ဇင် ကောင်လေးရင်ဘတ်ကို တွန်း၍ရုန်းထလာပြီး ထမီနဲ့ သူရွှေခရုလေးကို ဖုံးခါ လက်နဲ့ အုပ်ပြီး ငိုနေတော့တယ်.... နောက်ပြီး ထမီလေးကို လှန်ကာ သူ့ရွှေခရုလေးကို ကြည့်လိုက် လက်လေးနဲ့ အုပ်ခါ ငိုလိုက်နဲ့မို့ ကောင်လေးမှာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ပျာယာခတ်နေသလို ဇင်ကြည့်သလို ဇင့် ထမီလေးကို အတင်လှန်ပြီး ဇင့် ရွှေခရုလေးကို အတင်းကြည့်နေတယ်..နောက် ဇင့် ရွှေခရုလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လက်လေးနဲ့ ဖြဲကြည့်ပြီး ပါးစပ်ထဲကနေ လေလေးနဲ့ မှုတ်ပေးလုပ်နေလို့ ဇင်က ထမီကို အတင်းအုပ်ထားရတယ်။ နောက်....ကောင်လေးက ဇင့်ကို အတင်းထွေးပွေ့ထားပြီး....
“ဇင် ရယ် ...နာသွားလားဟင်... မောင့်ကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့... မောင် ဇင့်ကို ချစ်လို့လေ..”
“မောင် အရမ်းရက်စက်တယ် .. ဇင့်ကို မညှာမတာကြီးကို လုပ်တာ... ”..
“မဟုတ်ပါဘူး ဇင်ရယ်... မောင် ဇင့်ကို ယူမယ်.. အိမ်က သဘောမတူတာ မောင်ဂရုမစိုက်ဘူး.... မောင် ဇင့်ကို သန်ဘက်ခါ ည ခိုးပြေးမယ်...”
“တကယ်လား.. မောင် ရယ်....”
“မောင် ဇင့်ကို အရမ်းချစ်သွားပြီး သိလား... သန်ဘက်ခါည ၁၀ နာရီကျရင်.. မောင်တို့ ပဲခူးက မောင့် ...သူငယ်ချင်းအိမ်ကို ပြေးကြမယ်လေ.. နော်..”
“ဟုတ်..မောင်ရယ်.... မောင့် စိတ်ကြိုက်တာလုပ်ပါတော့... မောင့် သဘောပါပဲ... ဇင် ကတော့ မောင့်ကို အရမ်းချစ်လို့သာနော်... ဇင့် ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံး... ဇင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မောင့်ဘ၀ကို ပေးလိုက်တာနော်.. အဲဒါ.. မောင့်ကို ချစ်လွန်းလို့ သိလား .... မောင် သိလား..”
ဇင် ပြောပြောနဲ့ ကောင်လေးရင်ခွင်ထဲ ငိုနေလိုက်တာ....ကျွန်တော်ဆက်မကြည့်နိုင်တော့သလို မခံလည်း မခံစားနိုင်တော့လို့ ထိုအိမ်ထဲကနေ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး လေးလံတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အတူ ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။
မ်ိန်းမ..မိန်းမ...တံခါးမခေါက်ပဲ..၀င်လာပြီး.... ဘာမှမပြောပဲ ရောသောက်ထွက်သွားလိုက်တာ ရင်ဘတ်ကိုတောင် ခြေစုံနင်းသွားသေးတယ်။ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကို အပြစ်တင်ရအောင်လည်း.. ငါဘာအမှားတွေ မင်းကို လုပ်ခဲ့လဲ ဇင်ရာ ပြောကြစမ်းပါအုန်း..
ငါလည်း အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာပဲ.. ငါ့မှာ ဘာလိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေလို့ မချစ်တာလေးနဲ့ တင်ဘ၀က တည်ဆောက်လို့ မရတော့ဘူးလား… ဘ၀အတွက်နဲ့ အချစ်တွေကိုမေ့ထား ဆိုတဲ့ လောကနိယာမတွေကော ငါ့ကို ဘာမှအထောက်အကူ မပြုနိုင်တော့ဘူးလား.. နားကိုမလည်တော့တာ.. ငါ့မှာ အကုန်ပြည့်စုံနေရက်ကယ်နဲ့ ငါ့ကို ချစ်တယ်လေးတောင် တစ်ခွန်းမပြောခဲ့ဘူး… ချစ်လို့ တစ်ခွန်းလေးပြောလိုက်လို့ ငါ့ကို ထားခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ငါ့မှာ ဖြေသာသေးတယ်။ ခုဟာက သူ့ရဲ့ အယုအယတွေ အကြမ်းအတမ်းတွေက သာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ငါက ဘယ်မှာ သွားမေ့လိုရမလဲကွာ.. ငါလည်း နှလုံးသားရှိတဲ့ လူပါ။ အိမ်ကိုလည်း မပြန်ချင်တော့ပေ။ တွေးရင်း ကားကိုဦးတည်ရာ မောင်းနေလိုက်တာ.. ဘယ်ကိုမောင်းနေမှန်းမသိ.. သတိတစ်ချက်ထားတော့ ကိုယ်မောင်းနေတာက သောက်နေကျ ညလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းအစ်ကိုရဲ့ အရက်ဆိုင်ဘက်။ မသိစိတ်က အဲဒီဆိုင်ကို ဦးတည်မောင်းနေတာ ဖြစ်မည်။
ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ပါပဲ သောက်နေကျ အရက်ဆိုင်ရှေ့ကို ကားကအလိုလိုရောက်နေသလိုပဲမို့ ကားကိုရပ်လိုက်တယ်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၃နာရီတောင် မထိုးသေးဘူး။ သက်ပြင်းရှည် တစ်ချက်ချပြီး ကားစီယာတိုင်ပေါ်ခေါင်းတင်ရင်း ဇင့်အကြောင်းက ၀င်လာပြန်လို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။
ဇင်ရယ် ကိုကြီးကို သနားပါအုန်းကွာ... ကိုကြီးသေရပါတော့မယ်....ကိုကြီးက မနူးမနပ်လေးပါကွာ.... ကိုကြီးဘ၀ထဲကို ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါ။
ကားပေါ်က ဆင်းမယ်လုပ်ပြီး အမှတ်မထင် ကားနောက်ကြည့်မှန်ကို ကြည့်လိုက်မိတော့ လူရိပ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သေချာ ကားနောက်ကြည့်မှန်ကနေ ထပ်ကြည့်တော့ ....ဟာ... ဇင်... ဟုတ်တယ် ဇင်ရယ်ပါ။ ကားပေါ်မှာ ဆင်းကြည့်တော့.. ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ဇင် ရပ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတယ်။ ဇင် ကျွန်တော့်နောက်ကို လိုက်လာတာပဲ.. ဟု ၀မ်းသာအားရတွေးမိလို့ ဇင် ရှိရာကို ပြေးသွားလိုက်တယ်။ ဇင်ရှေ့ရောက်တော့.. ဇင် ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေပုံလေးက ကျွန်တော့်ကို တောင်းပန်နေတာလိုလို သူအမှားတစ်ခုခု လုပ်ထားလို့ ၀မ်းနည်းနေတာ လိုလို.. ကျွန်တော်သူ့ကို ချက်ချင်း ဖက်ထားလိုက်တယ်။ သူ့ခေါင်းလေးကို ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ သိမ်းထားလိုက်တယ်..။
“ဇင်... ဇင်ရယ်.. ကိုကြီးဆီလာတာလား .. ကိုကြီးဝမ်းသာလိုက်တာ.. ကိုကြီးခွင့်လွှတ်တယ် အားလုံးကို... ကိုကြီးဘာမှ မသိဘူးး. ဇင်သာ ကိုကြီး ဘ၀မှာ ရှိရင် တော်ပြီ... အားလုံးပြည့်စုံပြီ ဇင်ရယ်...”
ဇင် သူ့လက်ကလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ပုခုံးကို ဖက်လာတော့ သူ့လက်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်တော့… လူကို ထိတ်သွားတယ်... သွေးတွေ သွေးတွေပါလား.... ဇင့်လက်တွေ ဖယ်ချလိုက်တော့ ဇင့် တစ်ကိုယ်လုံးသွေးတွေ ဖြစ်နေတယ်..
“ကိုကြီး... ဇင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ... ဇင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုကြီးရယ်.... ဇင်... ကိုကြီးကို... ကိုကြီးကို.....”
ဆက်မပြောနိုင်ခင်မှာပဲ ဇင်လဲကျသွားတယ်..ဇင့်ကို ထွေးပိုက်လိုက်တော့ ဇင် ၀မ်းဗိုက်မှာ သွေးတွေနဲ့ အတူ အပေါက်ကြီး.... အားးးးးးး......
“တောက်... တောက်... တောက်....”
“ဆရာ.. ဆရာ... တံခါးဖွင့်ပါအုန်း... တံခါးဖွင့်ပါအုံး.... ဆရာဘာဖြစ်တာလဲ အဆင်ပြေရဲ့လား......”
အရက်ဆိုင်က ၀ိတ်တာလေးပါ ကားမှန်တံခါးကို အတင်ခေါက်ပြီးနှိုးနေတယ်... မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မှာ နေအလင်းရောင်ကြောင့် မျက်လုံးတွေ တစ်ချက်ပြာဝေသွားပြီး .... အော် ငါဒီ အိပ်မက် မက်ပြန်ပြီလား.... ဇင် တော့တစ်ခုခုပဲ... ကားမှန်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့...
“ဆရာ... ဆရာ .. အဆင်ပြေရဲ့လား.. နေကောင်းရဲ့လားဗျာ... မနက်ထဲက ဆရာ့ကားကိုတွေ့တယ်... အိပ်နေတာတွေ့လို့ မနိုးပဲထားတာ...”
“ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ညီလေးရာ...”
ဘာမှလည်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောချင်တော့ပါ.. ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဆိုင်ထဲတန်းဝင်ခါ အရက်တန်းသောက်တော့သည်။ အရက်သောက်နေရင်း စဉ်းစားမိနေသည်။ ဇင်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဒီ အိပ်မက်က ဘာလို့များ ခဏခဏ မက်နေရတာလဲ... စိတ်ကညစ်လာသလို ခေါင်းလည်း ခဲလာတာမို့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် အရက်ပဲ တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်နေလိုက်တော့တယ်။
ရုံးမှာ လူတွေ အကုန်စုံနေပေမဲ့ မျိုးကျော် တယောက်တော့ ရောက်မလာသေးပေ။ သူ နောက်ကျ နေတာလား မသိ။ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကော ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အသွေးအသားတွေကပါ မျိုးကျော်ကို မြင်နေရဖို့ မျိုးကျော်နဲ့ အနေနီးဖို့ကိုသာ အမြဲနှိုးဆော်နေသည်။ တင်မိုးနိုင်ရယ် နင့် ဒီအသက်အရွယ်က ယောက်ျားယူသင့်နေပြီလေ နင့်သွေးသားတွေက တောင်းဆိုနေတာတောင် နင်က ဘာတွေကိုငဲ့နေတာလဲ။ ဘာလဲ နင့်ရဲ့ သိက္ခာတွေလား မာနတွေလား... ဒါတွေကနင့်ကို နှိပ်စက်နေတာ နင်သိရဲ့လား။ မျိုးကျော် ဘယ်လောက် သနားဖို့ကောင်းလဲ ကြည့်ပါအုန်းဟယ်... အခန့်မသင့်ရင် မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်ကြောင့်နဲ့ ဘ၀တော့ပျက်ရတော့ပါမယ်။ နင်ကယ်မှရတော့မယ်.. နင့်ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ လက်တွေနဲ့ မျိုးကျော်ကို ထွေးပွေ့လိုက်စမ်းပါ.. တကယ်ကို အေးချမ်းသာယာတဲ့ ဘ၀လေးပါ... မျိုကျော်နင့်ကို ချစ်နေတာ နင်သိသလို... နင်လည်းမျိုးကျော်ကို ချစ်လာတာ နင့်ကိုနင်သိစမ်းပါ....
၀ူးးးး... ရူးချင်လှပြီ ငါ့စိတ်တွေကို ငါမနိုင်ဘူး မျိုးကျော်ရယ်.. နင်အမြန်လာပါတော့... ငါရဲ့ သိက္ခာတွေ ငါ့ရဲ့မာနတွေ ခုပဲချလိုက်ပြီ... ခုလိုနင်စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန်မှာ ငါဘေးကနေ ပြုစုပေးချင်နေမိပြီ။ ဒါပေမဲ့ မနက် ဆယ့်တစ်နာရီ ထိုးသည့် တိုင်အောင် မျိုးကျော်ရောက်မလာသေးပေ....။
အလုပ်ထဲလည်း စိတ်ကမရောက် မျိုးကျော်အကြောင်းပဲ တွေးနေတုန်း.... ကိုအောင်စိုး ကျွန်မဘေးနားရောက်လာတယ်။ တစ်ရုံးထဲ အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူပါ။ သူငယ်ချင်းတွေလိုပါပဲ။ အထူးသဖြင့် မျိုးကျော်နဲ့ ဆို ပြောမနာဆိုမနာ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ သူ့ကြည့်ရတာ မသက်မသာ နဲ့ ဖုန်းလေးကိုင်ခေါင်းကုပ်လျက် သက်ပြင်းတွေ တွင်တွင်သာချပြီး ကျွန်မဘေးလာရပ်နေတယ်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲ အောင်စိုး...နင့် ဟာက သက်ပြင်းတွေကလည်း ချလှချီလား..”
“မပြောချင်တော့ဘူးဟေ့... နင့် အကောင်မျိုးကျော်လေ..”
သူပြောလိုက်တော့ ပြန်ပင်မပြောနိုင်တော့ပါ သူ့စကားဆုံးအောင် စောင့်နေသလို စိုးရိမ်စိတ်တွေက တဖွားဖွားပေါ်လာသလို.. နောင်တတွေကလည်း ဘယ်ကမှန်းမသိ ပြေးထွက်လို့လာပြီ.. ကျွန်မရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေကို ကျွန်မရဲ့ မျက်နာပေါ်မှာ ပေါ်နေတာကတော့ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့ မရလိုက်ပါ.. အရင် အောင်စိုးတို့က နင့်အကောင်ကလေလို့ စရင် အသဲခိုက်အောင် စိတ်တိုတတ်တဲ့ ကျွန်မ.... စိတ်မတိုတဲ့ အပြင်.. စိုးရိမ်စိတ်ကြီးမားလာတဲ့ မျက်နှာအမူအယာကို အောင်စိုး တစ်ယောက် သေချာအကဲခတ်မိသွားပြီး... ကျွန်မကို တည်တည်ကြီး ကြည့်လျက်...
“ဟိုကောင်.. ငါ့ အစ်ကိုဆိုင်မှာ မနက်အစောကြီးထဲက ၀င်ပြီး အရက်သောက်နေတာတဲ့...”
သူဆက်မပြောသေးဘဲ ကျွန်မကို ကြည့်နေတယ်... ကျွန်မ သူဆက်ပြောမှာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေသလို ကြောက်လည်း ကြောက်နေမိတယ်.. သူများ တခုခုဖြစ်နေသလား.. မျိုးကျော်ရယ်... နင်ဘယ်လို ဖြစ်သွားတာလဲ....ဟယ်..
“ခု..ဒီကောင် လူမှန်းမသိ မူးပြီး သတိလစ် နေတယ်တဲ့... အဲဒါ ငါသွားခေါ်မလို့...”
အောင်စိုး ပြောပြောနဲ့ ကျွန်မစားပွဲပေါ် လက်ထောက်ပြီး သေချာစိုက်ကြည့်ခါ.....
“နင့်ကို ငါတစ်ခုမေးမလို့နော် နင်တို့နှစ်ယောက်ကို ငါ ကြည့်နေတာကြာပြီ.. နင်တို့ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ နင်တို့ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲ..ဟိုကောင်ကကော ခုဘာတွေ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်နေတာလဲ..”
ကျွန်မပြန်မပြော နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ... အောင်စိုး အဲဒီလိုထင်သွားတာလေးကိုတောင် စိတ်ထဲဝမ်းသာသလိုလို... အောင်စိုးလှည့်ထွက်သွားတယ်.. နောက် ရုံးခန်းပေါက်မှ နေပြီး တံခါးကိုဆွဲဖွင့်ရင်း ကျွန်မကို လှမ်းကြည့်နေတယ်။ သဘောကတော့ ပါးစပ်ကတော့ မပြောပေမဲ့ လိုက်မလား.. စောင့်နေတယ်နော် ဆိုတဲ့ သဘောမို့.. ကျွန်မချက်ချင်းပဲ အိတ်လေးဆွဲ လိုက်လာတော့တယ်..။
ဆိုင်ရောက်တော့ မျိုးကျော်ကားကို အရင်တွေ့တယ်။ ဆိုင်အထဲဝင်တော့ ၀ိတ်တာကောင်းလေးက အောင်စိုးဆီပြေးလာပြီး... အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြဟန်လုပ်နေတယ်။ ကျွန်မလည်း လိုက်ကြည့်တော့ မျိုးကျော် ခပ်လှမ်းက စားပွဲမှာ အရက်ခွက် အမြည်းခွက်တွေကြားမှာ မှောက်လျက်ကြီး။ ဘာမှပြောမနေတော့ဘူး သူ့ဆီကို ပြေးသွားမိတယ်။ သူ့ကို ညင်သာစွာ ထူမလိုက်တယ်။ နောက် ကပိုကရို ဖြစ်နေတဲ့ သူ့အ၀တ်အစားတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ပေးပြီး ပါးစပ်မှာပေနေတဲ့ အမြည်းအစအနတွေကို လက်ကိုင်ပ၀ါလေးနဲ့ သေချာသုတ်ပေးနေမိတယ်။ မျိုးကျော်ရယ်.. နောက်တစ်ခါ နင့်ကို အဲဒီလို မဖြစ်စေချင်ပါဘူးဟာ.. ငါနင့်ကို ပြုစုယုယချင်တယ်.. ခုလို အိမ်သူသက်ထား မိန်းမတစ်ယောက်လို.. ခုနင့်ကို ဒီလိုပြုစုရတာကို ငါ့စိတ်ထဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်ဟာ... ကျွန်မလုပ်နေတာကို အောင်စိုးမှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ရပ်ကြည့်နေတာကို သတိထားမိတော့ ကျွန်မအနည်းငယ် ရှက်နေမိပါတယ်။
လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင် မူးနေပြီး သတိလစ်နေတဲ့ သူ့ကို အရက်ဆိုင်ကနေ သူ့အိမ်ကို ခေါ်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ သူ့ကို အောင်စိုးနဲ့ အတူကုတင်ပေါ်တင် အောင်စိုးကပဲ သူ့ကို အ၀တ်အစားတွေလဲ ပေးနေတာမို့ ကျွန်မအောက်ဆင်းလာခဲ့တော့တယ်။
ဧည့်ခန်းထဲက ခုံမှာဝင်ထိုင်ပြီး အောင်စိုးက မျိုးကျော်ကို အ၀တ်လဲပေးအပြီးကို စောင့်နေမိတယ်။ ခဏကြာတော့ အောင်စိုးပျာပျာနဲ့ ဟမ်းဖုန်းလေးကိုကိုင်ပြီး တဟုတ်ကဲ့ထဲ ဟုတ်ကဲ့ လုပ်ရင်း အိမ်ပေါ်အခန်းမှ ဆင်းလာပြီး...
“မျိုးကျော် ကတော့မြွေပဲဟေးးး... သူ့ကိစ္စလုပ်နေတာနဲ့ ဟိုမှာ... ငါဒီနေ့ ကာစတန်မာ အသစ်တွေနဲ့ ချိန်းထားတာ.. ခု ကာစတန်မာတွေက ကုမ္ပဏီမှာရောက်နေပြီ.. အမ်ဒီက ငါ့လှမ်းခေါ် ကြိမ်း ကြိမ်းနေတယ်... အဲဒါသွားရမယ်.. ”
ကျွန်မ ဘာမှနားမလည် မသိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ အောင်စိုးပြောသမျှ မျက်နှာသေလေးနဲ့ နားထောင်နေမိတယ်.. စိတ်ထဲ တစ်မျိုးပဲ.. ပျော်လာသလိုလို ကြောက်လာတာလား မသိ.. ရင်တွေတော့ ခုန်လာတာ အမှန်...
“ခု ဆယ့်နှစ်နာရီ ထိုးတော့မယ် ငါ တစ်နာရီခွဲအရောက် ပြန်လာခဲ့မယ်.. အဲဒီကျမှ နင်ပြန်.. ငါဆက်စောင့်နေမယ်... ခုခဏလေး ငါ ပြန်လာခဲ့မယ်ဟာ နော်..”
အောင်စိုး ပျာပျာသလဲ မျိုးကျော်ကားကို ယူပြီး ထွက်သွားပြီ။ အောင်စိုးလည်း ထွက်သွားပြီမို့ တစ်ယောက်ထဲ ဧည့်ခန်းထဲ ခုံမှာ ထိုင်ရင်း မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဆွဲယူဖတ်နေလိုက်တယ်။ ကျွန်မမျက်လုံးတွေက မဂ္ဂဇင်းထဲက စာတွေကို ဖတ်နေပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေက အိမ်ပေါ်မှာက မျိုးကျော်ဆီမှာပါ။ စာအုပ်ဖတ်နေရင်းမှ ... မျိုးကျော်ရှိရာ အိပ်ခန်းဆီသို့ အသာမော့ကြည့်မိတယ်။ တစ်အိမ်လုံးမှာ... သူရယ် ငါရယ်.. နှစ်ယောက်ထဲပါလားဆိုတဲ့ အသိတစ်ချက်ဝင်လာလို့ ရင်တွေခုန်လာသလို အောက်က ရွှေခရုလေးက တဆတ်ဆတ်တုန်လာတယ်။ ကျွန်မခြေလက်တွေ အေးစက်လာသလိုခံစားရသလို မျိုးကျော်အခန်းကို သွားကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်ကတားမရပါ။
အိုးး..ဘာဖြစ်လဲ သူ့ကိုဂရုစိုက်ဖို့သွားမှာပဲ ဆိုပြီး... စာအုပ်လေးအသာချ မျိုးကျော် ရှိရာ အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းသို့ လှေကားမှတဆင့် ဖြည်းညှင်း ညင်သာစွာ တက်လာခဲ့တယ်။ မျိုးကျော် အခန်းတံခါးကို ဖွင့်သင့် မဖွင့်သင့် အနည်းငယ်တွန့်ဆုတ်နေပြီးမှ စိတ်က မထိန်းနိုင်တော့လို့ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး မျိုးကျော် အိပ်နေတဲ့ ကုတင်ဘက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကျွန်မယိုင်လဲကျမတတ်ပါပဲ...
ကျွန်မရင်တွေ တလှပ်လှပ်တုန်လာသလို ဒူးတွေလည်း မခိုင်တော့တာမို့ တံခါးမှီပြီး ကျွန်မရင်ဘတ်လေးကို ဖိထားနေရတော့တယ်။ အောင်စိုးက မျိုးကျော် အ၀တ်အစားတွေကို လဲသွားပေးခဲ့တာကြောင့် မျိုးကျော်မှာ အကျီခပ်ပါးပါးရယ် ပုဆိုးရယ်သာရှိပြီး မျိုးကျော်ပက်လက်လှန် အနေအထားမှာ ပုဆိုးပေါ်မှ ထောင်ပြီး ချွန်ထွက်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ မျိုးကျော်ရယ် ဒုတ်ကြီးကထောင်နေလိုက်တာဟယ်.. နင် ငါ့ကို လာပါလာပါလို့ များခေါ်နေသလိုပါပဲလား ... ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တဆတ်ဆတ် တုန်နေသလို ကျွန်မရဲ့ အကြည့်တွေက မျိုးကျော်ဒုတ်ကနေ ဖယ်မသွားနိုင်တာကြောင့်... မျိုးကျော်ရှိရာ ကုတင်ဆီသို့ တရွေ့ရွေ့သွားနေတော့တယ် ....။
အနီးကပ်ကြည့်လေ ပုဆိုးကိုဖောက်ထွက်တော့ မလားပဲဟယ်.. ရင်တွေခုန်လိုက်တာနော်။ မျိုးကျော်ကုတင်ဘေး အသာရပ်ကြည့်နေမိတယ်။ ကျွန်မစိတ်တွေ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ဖို့ တအားကို နှိုးဆော်နေပြီလေ... မျိုးကျော်အိပ်နေတဲ့ ဘေးအသာထိုင်လိုက်ပြီးတော့မှ.... ဆက်ကနဲ့ ပြန်ထပြီး အခန်းအပေါက်နားသွားရပ်နေပြန်တယ်.. ငါဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ တင်မိုးနိုင်ရယ်... မဟုတ်သေးပါဘူး.. အခန်းအပြင်ထွက်ပြီး ဘယ်သူမှမရှိတာကို တစ်ယောက်ယောက်များရှိလားလို့ လိုက်ရှာကြည့်မိနေတယ်။ နောက် အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး သေချာဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တယ်။ မျိုးကျော်အနားကပ်သွားပြီး...မျိုးကျော်ကို နာမည်အရင်ခေါ်နှိုးကြည့်တယ်။
မရ... ဟုတ်ပြီ..။ စိတ်ထဲ နည်းနည်းတော့ပျော်လာတယ်။ အသာဘေးနားထိုင်ပြီး လက်ကလေးနဲ့ တို့ပြီး နှိုးကြည့်.. တုပ်တုပ်မှ မလှုပ် ... တစ်ချက် အခန်းပေါက်ဝလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်.. အောင်စိုးကတော့ ပြန်လာသေးမှာ မဟုတ်သေးဘူး ခုမှ ထွက်သွားတာ မိနစ် ၂၀ တောင် မပြည့်သေး ....
မျိုးကျော်ဒုတ်ကိုတော့ ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ် ... သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ထောင်ကျသွားရင် မစားရ ၀ခမန်းတွေ လာလာပြောကြတာ ငါ့မှာတော့ ယောက်ျားပစ္စည်းတောင် မမြင်ဖူးတဲ့ ဘ၀ ... မျိုးကျော်နား အသာတိုးကပ်ပြီး သူ့ပုဆိုးလေးကို အောက်ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း လှန်လိုက်ရာ... ဟယ်... ပုဆိုးကို ပစ်ချပြီး အခန်းပေါက်ဝ သွားရပ်နေမိတယ် .... အောင်မလေးနော် ငါ့နှယ်... ဒုတ်ကြီးက ပုဆိုးရဲ့ အထိန်းအကွပ် မရှိလို့ထင်တယ် ထောင်မတ်နေပေမယ့် ဝှေ့ရမ်းလို့ နေတော့တယ်။ အခန်းပေါက်မှ အပြင်ကို တစ်ချက်ကြည့်မိသည်။ ပြီးတော့ အခန်းထဲ မျိုးကျော်ဒုတ်ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်မိနေတယ်။ တင်မိုးနိုင်ရယ် ... တော်ပါတော့ ကြည့်ပြီးပြီးပဲ စိတ်ကျေနပ်ပါတော့…
ကျွန်မစိတ်တွေ လွန်ဆွဲနေပြီလေ... မျိုးကျော်ဒုတ်ကို လက်လေးနဲ့ ကိုင်ကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်.. ကိုင်ဖူးချင်တဲ့ စိတ်က တားမရတော့ပြန် ငါနှယ်နော် မောင်ကျန်တတို့တော့ ဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်ဆုံး ကိုယ်စိတ်ကို ကိုယ့်ရဲ့ အာသီသကို အရှုံးပေးလိုက်ရပြီ ထင်ပါတယ်။ မျိုးကျော်နားသွားပြီး ... မျိုးကျော်ဒုတ်ကို လက်နဲ့ ကိုင်မလို့ ရွယ်ပြီးမှ မျိုးကျော် မျက်နာလေးကို တချက်ကြည့်ပြီး သက်ပြင်းလေးချခါ ကိုင်လိုက်တော့တယ်။ ပူပူနွေးနွေးလေးပါလား မာတယ်ထင်ရပေမဲ့ နူးညံ့တဲ့ အသားအရေပဲ ... ညာလက်နဲ့ လှမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ရာ သူဒုတ်က အထက်ကို လက်ငါးလုံးလောက် ကျန်နေသေးတယ်... ဒါကြီး ထိုးထည့်ခံရရင် သေပြီပေါ့ဟယ် ... ကိုင်နေရင်းမှာ မျိုးကျော်မျက်နှာလေးကို ကြည့်နေရင်း သူဒုတ်ကို အထက်အောက် ဂွင်းတိုက်တဲ့ ပုံလေး လုပ်ပေးနေမိတယ်။ ဒီလိုလေး လုပ်မှပဲ မျိုးကျော်ရဲ့ ဒုတ်က ပိုပြီးတောင် သန်မာပြီး ကြွတက်လာသလိုပါပဲလား... ဟယ်တော်.. ကြောက်စရာပါလားနော်... လက်ကလည်း မလွှတ်ချင်.. စိတ်ထဲ ငါအခုမှ လူဖြစ်တာနဲ့ တူတယ်။ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ ဒုတ်ကိုကိုင်လိုက်ရတာ တကယ့်ကို ခံစားမှုတစ်ခုပဲ။ ကိုင်နေရင်း ကုန်းစုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေက တဖွားဖွားဖြစ်လာလို့ ဂွင်းထုပေးရင်းတန်းလန်း စုပ်မလို့ ကုန်းလိုက်ပြီးမှာ သတိဝင်လာပြီး.. အိပ်ခန်းအပြင်ထိအောင် ထွက်ပြေးမိတော့တယ်။
တင်မိုးနိုင်...တင်မိုးနိုင်... နင်ဟာလေ.. ဘာမှေ-ာက်သုံးမကျ မိန်းမဖြစ်သွားပြီးနော်.. ကိုယ့်ပါးကို လည်းတချက်.. “ဖြန်း”.. ကနဲ့ မြည်အောင်ရိုက်လိုက်တယ်။ အသိတရားတွေ ၀င်စမ်း.. အသိတရားတွေ ၀င်စမ်း... စိတ်ရဲ့ လွန်ဆွဲပွဲ လှုပ်ရှားများလို့လားမသိ .. မောလာသလို ရင်ခုန်အားက မြင့်တက်လားပြီး ဒူးတွေယိုင် စိတ်တွေက ထပ်မတောင့်နိုင်အောင်ပါပဲ.. မျိုးကျော်ရယ် ...ငါဘယ်လို လုပ်ရပါ့မလဲဟယ်... သေချာပြန်စဉ်းစားအုန်းနော် အခွင့်အရေးဆိုတာ တစ်ခါပဲရတာ... အောင်စိုးပြန်မလာခင်အထိတော့ မျိုးကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနေတာပဲ... ဟာ... ကြာတယ်.. တင်မိုးနိုင် စိတ်တွေ ခက်ထန်လာပြီး အိမ်ပေါ်သို့ တစ်ခါ ပြန်ပြေးတက်သွားတယ်။
အခန်းပေါက်ဝကနေ ထောင်နေတဲ့ မျိုးကျော်ဒုတ်ကို အရောင်တွေလက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ စူးစိုက်ကြည့်ပြီး မျိုးကျော်နားကပ်ခါ ဘေးမှာထိုင်ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့မျိုးကျော် ဒုတ်ကိုကိုင်ပြီး ခါးကုန်းကာ မျိုးကျော် ဒုတ်ကိုလျားလေးနဲ့ အရင်တို့ကြည့်တယ်။ ပြီးမှ ဒုတ်ဒ-်လေးကို အနီးကပ်ကြည့်လိုက်တော့.. ဟယ်.. ချစ်စရာလေးတော့... ပန်းရောင်လေး ရဲတွတ်နေတာ အထစ်လေးနဲ့ ပါလား။ စိတ်တွေကြွလားသလို ပျော်လာတယ်။ နောက် ဒ-်ကလေးကို အရင်ဆုံး စုပ်ငုံလိုက်တယ်။ စုပ်ငုံရင်း မျိုးကျော်များနိုးလာမလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ငုံရင်းတန်းလန်း မျိုးကျော်ကို ကြည့်မိတယ်... နောက် အခန်းပေါက်ဝကို တစ်ချက်ကြည့် အ၀င်တုန်းက တံခါးပိတ်ခဲ့ပါလားဆိုပြီး ပြန်ထခါ အခန်းတံခါးကို သွားဖွင့်လိုက်တယ်။ အကယ်၍များ အောင်စိုးပြန်လာရင်.. အရင်ဆုံးကားသံကြားရရင် အောက်ပြန်ဆင်းပြေးချိန် ရနိုင်လို့ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ မျိုးကျော်ဆီ ပြန်လာပြီး ဒုတ်ကို သေချာကိုင်ပြီး စိမ်ပြေနပြေ စုပ်ပါတော့တယ်။
ဟယ်..... ငါ့နှယ်နော် တကယ်ကို အရသာရှိတာပဲ ..ကြည့်စမ်း .... ကိုယ့် ပါးစပ်ထဲ ဒုတ်ဝင်သွားတာကိုက ကျောပြင်တစ်ခုလုံး အကြောတွေ စစ်စစ်ဖြစ်လာသလိုလို စုပ်နေတုန်း မျိုးကျော် ဖီးလ် တက်ပြီး အနည်းငယ်လှုပ်လာလို့ စုပ်ရင်းတန်းလန်း ခဏရပ်ပြီး မျိုးကျော်ကို လှည့်ကြည့်မိတယ်... မျုိးကျော်ရယ် .. အိမ်မက်ထဲမှာ နတ်သမီးလေးက စုပ်ပေးနေတယ် လို့ မက်လိုက်တော့ဟယ်... ဒုတ်ကို ပြန်ထုတ်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ထိပ်မှာ အရည်ကြည်လေးထွက်လာတာကို မြင်လိုက်ရတယ်.. ဟယ်သူကလည်း ထွက်တယ်တော့..စိတ်ထဲ တအားပျော်နေပြီ.. ငါမျိုးကျော်ကို တခဏပိုင်ဆိုင်နေရတာပဲ..စုပ်ရင်း အရှိန်လွန်လာလို့ အာခေါင်ကို သွားထောက်တော့ ဟွန့်ကနဲ ချောင်းဆိုးချင်လာသလို ဖြစ်သွားတယ်။
သတိထားပြီး မျိုးကျော် ဒုတ်တစ်ဝက်သာသာလောက် ထိပဲ စုပ်ငုံပေးနေတုန်း မျိုးကျော် ဖီးလ်တက်လာပြီး သူ့ဆီးခုံတွေ တဆက်ဆက် တုန်လာပြီးနောက် ကျွန်မပါးစပ်ထဲမှာ ပူကနဲ့ ဖြစ်တာကို သတိထားမိပြီး ကမန်းကတန်း စုပ်နေတဲ့ ဒုတ်ကို ဖြုတ်လိုက်တော့.. ဟယ်.. ဘာတွေလဲ ...အာ..မျိုးကျော်ဆီက သုတ်တွေထွက်ကုန်တာပဲ.. ကျွန်မနှုတ်ခမ်းတွေမှာလည်း ပေကုန်ပြီ.. အဲတော့ .. မီးတောင်ကြီးက ချော်ရည်တွေ ထွက်လာသလိုပဲ မျိုးကျော်ဒုတ်မှ သုတ်ရည်တွေ လျံကျလာပြီး သူ့ဆီးခုံတွေ သူ့ပေါင်တွေပေါ် ပေကျံလို့နေတယ်။ ကျွန်မလည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိတော့ပေ။ အောင်စိုးသာ ဒီအချိန်ပြန်လာရင်တော့ သေပြီ..
တင်မိုးနိုင်ရေ... မဖြစ်ဘူး စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားလိုက်ပြီး... ရေချိုးခန်းထဲ သွားပြီး တဘက်အသေး တစ်ထည်ကို ရေဆွတ်ပြီး မျိုးကျော်ဆီ ပြန်ပြေးလာ သူ့ဒုတ်တွေကော သူ့ဆီးခုံတွေ သူ့ပေါင်တွေပေါ်မှာ ပေကျံနေတဲ့ သုတ်တွေကို သေချာ သုတ်လိုက်ပြီး.. ပုဆိုလေးနဲ့ အုပ်ထားလိုက်တယ်ရှိသေးတယ်.. အောက်မှ ကားသံကြားလို့ အမြန်ပြေးဆင်းခဲ့ရတော့တယ်။
အိမ်အောက်ဆင်း ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဟန်မပျက်ထိုင်ပြီး စာအုပ်ဖတ်ချင်ယောင်ဆောင် နေလိုက်တယ်။ ခုထိပါးစပ်ထဲမှာ မျိုးကျော်ရဲ့ သုတ်ရည်တချို့က ရှိနေသေးတယ်.. မျိုချရမလား ထွေးထုတ်ရမလား မသိ...အရေးထဲ အောင်စိုးက ၀င်လာပြီ....
“၀ူးးးးးးး...... မပြောချင်ဘူး တင်မိုးနိုင်ရေ... မောလိုက်တာဟာ... ဟိုလည်းရောက်ကော ကာစတန်မာတွေကိစ္စ မြန်မြန် အဆင်ပြေလို့ တော်သေးတယ်.. အဲဒါ မြန်မြန်ပြီးလို့ မြန်မြန်ပြေးလာတာ...”
ခေါင်းပဲ ငြိမ့်ပြလိုက်တယ်.. ပါးစပ်ဖွင့်ပြောလို့ မဖြစ်... ပါးစပ်ထဲမှာ အရည်တွေက ရှိနေတုန်း.. ခက်ပါပြီ..
“နင်ပြန်တော့မလား ပြန်တော့လေ... ”
ခေါင်းပဲ ငြိမ့်ပြလိုက်တယ်... ပြန်မယ်ပေါ့
“ဟိုမှာ ...ခင်ခင်ထွေးတို့က ပြန်လာရင်တဲ့ ... သူတို့ အတွက် ရှောက်သီးသုပ်ဝယ်ခဲ့ပါအုန်းတဲ့... နင်သိတယ်တဲ့ ဆိုင်ကို...”
ခေါင်းဆက် ငြိမ့်ပြလိုက်တော့ အောင်စိုး ကျွန်မကို မျက်မှောင်ကုပ် စိုက်ကြည့်ပြီး...
“ငါပြောတာ ကြားလား.. ဘာဖြစ်နေတာလဲ... ခေါင်းကြီး ငြိမ့်နေတာလဲ... ပြန်ပြောအုန်းလေ...”
မထူးတော့ပြီး ပြန်မပြောရင်လည်း သူက အရစ်ရှည်နေအုန်းမှာ မို့လို့.. ပါးစပ်ရှိတာတွေ အကုန် ကြိတ်မှိတ် မျိုချပြီး..
“အေးး.. အဟွတ်... ၀ယ်..လိုက်မယ်... ၀ယ်တွားလိုက်မယ်...”
ချောင်းတစ်ချက်ဆိုးပြီး စကားတောင် မပီချင်တော့ပါ... အောင်စိုး ကျွန်မကို နားမလည်နိုင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ ကျွန်မ မျိုးကျော်အိမ်က ထွက်လာခဲ့တယ်။
မျိုးကျော်တို့ လမ်းထဲက ထွက်။ လမ်းထိပ်က ဘက်စကားမှတ်တိုင်မှ တဆင့် ဘက်စ်ကား စီးလာခဲ့တယ်။ တစ်လမ်းလုံး ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ် ပြန်တွေးရင်း တအားရယ်ချင်လာလို့ စိတ်ရှိလက်ရှိ ဖွင့်ထုတ်ရယ်လိုက်တယ်။ ဘေးနားမှ လူတွေက ကျွန်မကိုကြည့်နေတယ်။ အသာ မျက်နှာပိုးသတ်ပြန်တော့လည်း ပိုလို့သာရယ်ချင်နေပြန်တယ်…
မျိုးကျော်ရယ်... ငါဘ၀ကတော့လေ.. ဒီနေ့ ဟာ တကယ် သည်းထိတ်ရင်ဖိုနေ့ပါလားနော်.. ဟွန်း... ကောင်စုတ်.. ငံကျိကျိနဲ့ ဟယ် သူ့အရည်တွေက တကယ်ပဲ...
ဟီးဟီး.. ခုထိတောင် ငံနေတုန်း ရေကလည်း သောက်ချင်လာ ရေဗူးကလည်း မရှိ ပလုပ်လေးကျင်းဖို့တောင် .... တင်မိုးနိုင်ရယ်... တကယ်ပါ တွေးလေ အူတက်လေပဲ...
ငါ့နှယ်နော်.. ပါးစပ်နား ပွတ်သပ်ပြီး ပြန်တွေးနေတော့ ပါးပေါ်မှာ ချောက်ကပ်ကပ်နဲ့ အရာလေး စမ်းမိတော့.... ဟယ်ကြည့်စမ်း.. မျိုးကျော်ရဲ့ သုတ်တွေက ပါးပေါ်ထိတောင်တက်ပေနေတာကို မသိ.. ခုတော့ ကိုယ့်အပူရှိန်ကြောင့် ထင်တယ်.. ..ခြောက်ပြီးကပ်နေလိုက်တာ.. .. အဖြူအချပ်လိုက်လေးအတိုင်းခွာလိုက်ပြီး ကြည့်မိလို့ တစ်လမ်းလုံး တစ်ယောက်တည်း.... ရယ်ပြီးရင်း ရယ်... ရယ်မိနေတော့တယ်။
လူနာကုတင် ၃၁ (အပိုင်း ၅) ဆက်ဖတ်ရန် »